Ukuguqulwa Kwedijithali Nokubaluleka Kokuhlanganisa Umbono Wamasu | Martech Zone
Enye yezintambo ezimbalwa zesiliva zenkinga ye-COVID-19 yezinkampani kube ukusheshisa okudingekayo kokuguqulwa kwedijithali, okutholwe ku-2020 ngama-65% ezinkampani ngokusho UGartner. Bekulokhu kuqhubekela phambili ngokushesha kwazise amabhizinisi emhlabeni wonke asebenzise indlela yawo.
Njengoba lolu bhubhane lugcine abantu abaningi begwema ukuxhumana ubuso nobuso ezitolo nasemahhovisi, izinhlangano zazo zonke izinhlobo bezilokhu ziphendula amakhasimende ngezinsizakalo ezidijithali ezilula. Isibonelo, abathengisi bezitolo kanye nezinkampani ze-B2B ezingakaze zibe nendlela yokuthengisa imikhiqizo bebelokhu besebenza isikhathi esengeziwe ukukhipha amakhono amasha we-e-commerce, ngenkathi ngasikhathi sinye besekela abasebenzi abasebenza ikakhulukazi ekhaya. Ngenxa yalokhu, ukutshalwa kwezimali kubuchwepheshe obusha sekuqhubekile nokuhambisana nokulindelwe kwamakhasimende.
Noma kunjalo ugijimela ukutshala imali kwezobuchwepheshe ngoba kunjalo into okufanele yenziwe akuvamile ukuthi kube isu elihle lokusebenza. Izinkampani eziningi zithenga ubuchwepheshe obubizayo, zicabanga ukuthi zingalungiswa kalula ngokuhamba kwesikhathi ukuze zilingane namamodeli athile webhizinisi, izethameli eziqondiwe, nezinhloso zesipiliyoni samakhasimende, kuphela ukudumazeka phansi komgwaqo.
Kufanele kube necebo. Kepha kule ndawo yebhizinisi engaqinisekile, kufanele futhi kube nokuphuthuma. Inhlangano ingakufeza kanjani kokubili?
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu, njengoba ibhizinisi liya kwidijithali ngokuphelele, ukuhlanganiswa kombono wamasu aqinile kuyo yonke i-IT nokumaketha ngeso elibheke ekuvuthweni kwedijithali. Ngaphandle kwayo inhlangano iba sengcupheni yokuncipha kwemiphumela, ubuchwepheshe obuningi, kanye nezinhloso zebhizinisi ezingekho. Kodwa-ke kunombono oyiphutha wokuthi ukwenza amasu kusho ukubambezela inqubo. Akunjalo. Noma ibhizinisi selingene ekukhishweni kwalo, akukephuzi kakhulu ukwenza izinguquko ukuhlangabezana nezinhloso ezisemqoka.
Ukubaluleka Kokuhlola Nokufunda
Indlela enhle yokuhlanganisa umbono wamasu kuguquko lwedijithali ukucabanga kokuhlola nokufunda. Imvamisa umbono uqala ebuholini futhi uqhubeke nemibono eminingi engaqinisekiswa ngokwenza kusebenze. Qala okuncane, uvivinye ngama-subsets, funda ngokwengeziwe, wakhe umfutho, futhi ekugcineni uzuze izinhloso zebhizinisi ezinkulu nezinhloso zezezimali. Kungahle kube nezingqinamba zesikhashana endleleni - kodwa ngendlela yokuhlola nokufunda, ukwehluleka okubonakalayo kube ukufunda futhi inhlangano iyohlala ikwazi ukuqhubeka nokuhamba phambili.
Nawa amathiphu ambalwa wokuqinisekisa ukuguqulwa kwedijithali okuphumelelayo, okufika ngesikhathi ngesisekelo seqhinga eliqinile:
Beka okulindelwe okucacile ngobuholi. Njengezinto eziningi kangaka, ukwesekwa okuvela phezulu kubalulekile. Siza abaphathi abaphezulu ukuthi baqonde ukuthi ijubane ngaphandle kwamasu aliphikisi. Indlela yokuhlola nokufunda izofaka inhlangano ezinhlosweni zayo zokuphela ngesikhathi esifushane futhi iqhubeke nokuqinisa umbono wayo jikelele.
Tshala imali kubuchwepheshe obufanele bokusekela. Ingxenye yenqubo yenguquko yedijithali ephumelelayo iba nezinqubo ezinhle zokuqoqwa kwedatha nezinqubo zokuphatha, amathuluzi okunika amandla ukuhlolwa nokwenza ngezifiso, kanye ne-analytics kanye ne-intelligence yebhizinisi. Isitaki se-martech kufanele sibuyekezwe ngokuphelele ukuqinisekisa ukuthi amasistimu axhumene futhi asebenza ngokubambisana kahle. Izinkinga zenhlanzeko yedatha nezinqubo eziyinselele zemanuwali yizingibe ezivamile ezifika endleleni yokuguqulwa kwedijithali. Amasistimu kufanele futhi atholakale futhi aguquguquke ukusebenza nobuchwepheshe obusanda kufakwa njengoba ibhizinisi lishintsha. Ukufeza lokhu, abalingani be-R2i ne-Adobe njengezixazululo zabo zenzelwe ukugcwalisana kanye nobunye ubuchwepheshe obusezingeni eliphakeme ngaphakathi kohlelo lwe-martech, ukuxhuma idatha kusuka emithonjeni eminingi kuya kuzingxenyekazi ezimaphakathi.
Ungayinqobi inqubo. Hlanganisa ngokuhamba kwesikhathi. Izinhlangano eziningi zimisa ubuchwepheshe bazo bedijithali okokuqala, okusho ukuthi kuningi okumele kufundwe ngasikhathi sinye. Kuwukuhlakanipha ukuhlasela ukutshalwa kwezimali ngezicucu ezincane ngesigaba, ukuqonda amasistimu njengoba uhamba. Futhi, izinhlangano eziningi zingaphansi kwengcindezi enkulu yezezimali, okusho ukwenza okuningi ngabantu abambalwa. Kulesi simo, ukutshalwa kwezimali kusenesikhathi kungenzeka kugxile kokuzenzakalela ukuze abasebenzi abakhona batholakale ukugxila kwimisebenzi engeze inani. Ngokusungula umgwaqo wobuchwepheshe, ibhizinisi lizosebenza kahle kakhulu ekugcineni lifinyelele ezinhlosweni zalo ezibanzi.
Zibophezele ekubikeni njalo ngenyanga noma ngekota. Ukuze inqubo isebenze, kufanele kube khona obala mayelana nokufundwayo nokuthi kuthinta kanjani uhlelo lonke. Setha umgomo wokuhlangana nobuholi bezinkampani namalungu eqembu abalulekile njalo ngenyanga noma ngekota, ukuhlinzeka ngezibuyekezo, okufundwayo, nezincomo zokulungiswa kohlelo. Ukuqinisekisa ukusetshenziswa ngempumelelo, kungaba ukuhlakanipha ukugcina uzakwethu wedijithali. Uma i-COVID-19 ifakazele noma yini, ukuthi amasu asindayo awasakwazi ukwenzeka ngoba lapho kuvela izehlakalo ezingalindelekile, izinhlangano kumele zikwazi ukwahlulela ngokushesha okufanele zime kancane nokuthi yini okufanele iguquke. Ozakwethu abanolwazi lobuchwepheshe nobuchwepheshe bobabili banokuqonda okujulile kokuthi bobabili bahlangana kanjani. Bangasiza ekwakheni izinhlelo eziguquguqukayo ezizosebenza futhi zisebenziseke izinyanga ezintathu, izinyanga eziyisithupha, unyaka, noma iminyaka emithathu kusukela manje.
Ngonyaka odlule umhlaba ushintshile - hhayi ngenxa ye-coronavirus kuphela. Ukulindelwa kokuhlangenwe nakho kwedijithali kuguqukile, futhi amakhasimende alindele ileveli efanayo yokuthola usizo nokusekelwa, noma ngabe bathenga amasokisi noma amaloli kasimende. Ngaphandle kwesigaba sebhizinisi, izinkampani zidinga okungaphezu kwewebhusayithi; badinga ukwazi ukuthi bangaqoqa kanjani idatha yezimakethe, ukuthi bangaxhuma kanjani leyo datha, nokuthi basebenzise kanjani lokho kuxhumana ukuletha okuhlangenwe nakho kwamakhasimende okwenzelwe wena.
Kulokhu, isivinini namasu akuzona izinhloso ezihambisana. Izinkampani ezikuthola kahle yilezo ezingagcini nje ngokwamukela umqondo wokuhlola nokufunda kepha futhi ezethemba abalingani bazo abangaphakathi nabangaphandle. Amaqembu kufanele ahloniphe ubuholi bawo, futhi abaphathi kumele banikeze ukwesekwa okufanele. Unyaka odlule ubuyinselele ukusho okuncane - kepha uma izinhlangano zihlangana, zizovela ohambweni lwazo lokuguqulwa kwedijithali ziqine, zihlakaniphe, futhi zixhumeke kakhulu kumakhasimende azo kunanini ngaphambili.
Tags: adobeezishintshayoi-covid-19inhlanzeko yedathaukuguqulwa kwedijithaliUkuhlanganiswaUbuholiisitaki se-martechukubikaumbono wamasuisuUbuchwepheshehlola futhi ufunde
UCarter Hallett ungusomaqhinga wokukhangisa nge-digital ejensi likazwelonke ledijithali Ihlanganiswe kabusha. UCarter uletha isipiliyoni seminyaka eyi-14 + kanye nesizinda esihle kakhulu ekwengameleni amasu wokumaketha wendabuko nedijithali. Usebenza namakhasimende womabili we-B2B ne-B2C ukuthuthukisa izisekelo zamasu ezijulile, ukuxazulula izinselelo zebhizinisi labo, nokwenza ukuxhumana okucwilisayo nokunengqondo, kugxilwe ekuxoxweni kwezindaba zokudala, isipiliyoni samakhasimende angama-360-degree, ukukhiqizwa kwesidingo, kanye nemiphumela elinganisekayo.